Qodobkaan, waxaad xaqiiqdii kaheli doontaa aqoonta iskuulada injineernimada ugufiican California ee bixiya deeqaha waxbarasho ardayda Qaranka iyo kuwa caalamiga ah.
Haddii aad damacsan tahay inaad wax ku barato Kaalifoorniya qaybta injineernimada oo aad weli raadineyso iskuulada ugu fiican injineernimada ee California, USA, markaa looma baahna in laga walwalo.
Midda kale si loo caawiyo ardayda mustaqbalka ee injineernimada inay sahamiyaan barnaamijyada iyo iskuulada California, waxaan diyaarinay liistada 5 ee jaamacadaha injineernimada ee California.
Iskuulada Injineerinka Ugu Fiican California
Iskuulka Injineerinka ee Jaamacadda Stanford
Jaamacada Standford Deeqaha waxbarasho
Jaamacadda California, Berkeley School of Engineering
Jaamacadda California, barnaamijyada injineernimada Berkeley
Jaamacadda California, Berkeley Deeqaha La Heli Karo
Machadka Teknolojiyada California (Caltech)
Barnaamijyada injineernimada ee Caltech
Machadka Farsamada ee Teknolojiyada ee California
Jaamacadda Koonfurta California ee Iskuulada Injineerinka
Jaamacadda Koonfurta California Barnaamijyada Injineernimada
Jaamacadda Koonfurta California ee Deeqaha La Heli Karo
Iskuulka Injineerinka ee Santa Clara University
Barnaamijyada Injineerinka ee Jaamacadda Santa Clara
Jaamacadda Santa Clara University Deeqaha La Heli Karo
Jaamacadda California ee Iskuulka injineernimada
Jaamacadda Stanford waa jaamacad cilmi baaris gaar loo leeyahay oo ku taal Stanford, California USA. Waxaa la aasaasay 1885 oo ay aasaaseen Leland iyo Jane. Jaamacadda Stanford waa mid ka mid ah jaamacadaha adduunka ugu fiican si ay u bartaan edbinta injineernimada.
Injineeriyada waa mid kamid ah kuwa ugu caansan jaamacadaha. Deeq-lacageed deeqsinimo leh oo ka socota jaamacadda illaa ardayga heerka koowaad ee jaamacadeed waxay ka caawisaa farxadda shahaadada koowaad ee jaamacadeed dhaqaalo fara badan, ku raaxeysiga sinnaanta khibradda iyo fursadda.
At Iskuulka Injineerinka ee Stanford, waxaa jira barnaamij injineernimo badan oo laga kala xusho
Injineernimada madaniga ah iyo deegaanka,
Maamulka Sayniska iyo Injineernimada
Deegaanka Barashada: Stanford University waxay siisaa jawi waxbarasho wanaagsan ardayda gudaha iyo dibedda. Ardayga koowaad ee shahaadada koowaad ee jaamacadeed waxaa looga baahan yahay inuu ku noolaado xerada, dhammaan ardayda jaamacadaha dhigataana waxaa loo ballan qaadayaa guryo dhammaan afarta sano ee jaamacadeed.
Ma waxaad raadineysaa jaamacadda injineernimada ugu wanaagsan California oo leh deeq waxbarasho oo wax lagu barto? Markaa waad awoodi kartaa Jaamacadda Stanford Doorashadaada.
Jaamacadda Standford waa la heli karaa Deeqo
Jaamacadda Standford waxay qabataa barnaamijyo deeqo waxbarasho oo kaa caawin kara inaad maalgaliso waxbarashadaada.
Marka, haddii aad rajeyneyso inaad ka hesho abaalmarin deeq waxbarasho jaamacadda, markaa waxaan kugula talin doonaa inaad gujiso xiriirka deeqaha waxbarasho ee hoose, si aad u aragto tilmaamaha lagama maarmaanka u ah sida loo dalbado mid ka mid ah deeqda waxbarasho ee ay bixiso SU-daas adiga
Liistada ku xigta waa Jaamacadda California. Waa mid ka mid ah jaamacadaha ugu da'da weyn ee cilmi baarista ee ku yaal Berkeley, California, USA. Waxaa la aasaasay 1868.
Jaamacadu waxay bixisaa 107 shahaadada Bachelor-ka dhamaan kuliyadaha iyo iskuulada, 20 barnaamijyada injineernimada ee kuliyada injineernimada.
Ardayda iyo ardayda mustaqbalka ee Jaamacadda California, Berkeley waxay xaq u leeyihiin gargaar lacageed oo kala duwan oo dawladeed iyo mid gaar loo leeyahay. Guud ahaan, weydiimaha gargaarka maaliyadeed waxaa laga baaraandegaa Jaamacadda Kaalifoorniya Berkeley Gargaarka Dhaqaalaha iyo Xafiiska Deeqaha.
Ma waxaad raadineysaa deeq waxbarasho si aad wax uga barato jaamacad kasta oo injineernimada California ah? Waad dooran kartaa Jaamacadda California, Berkeley doorashadaada.
Kiimikada iyo Bi-molecular Engineering
Injineernimada madaniga iyo deegaanka
Injineerinka Korantada iyo Cilmiga Computer-ka
Qalabka Sayniska & Injineerinka
Sayniska Molecular iyo Software Engineering
Jaamacadda California Berkeley waxay bixisaa qaar ka mid ah barnaamijyada deeqaha waxbarasho oo kaa caawin kara inaad maalgeliso waxbarashadaada.
Marka, haddii aad rajeyneyso inaad ka hesho abaalmarin deeq waxbarasho jaamacadda, markaa waxaan kugula talin doonaa inaad gujiso xiriirka deeqaha waxbarasho ee hoose, si aad u aragto tilmaamaha lagama maarmaanka u ah sida loo dalbado mid ka mid ah deeqda waxbarasho ee ay bixiso UC adiga
Tani waa cilmi-baaris kale oo caalami ah oo cilmiga sayniska iyo injineernimada iyo jaamacad gaar loo leeyahay. Waa mid ka mid ah jaamacadaha yar yar ee hormuudka ah ee ku yaal Pasadena, California, Mareykanka. La aasaasay 1891.
Jaamacadda barnaamijyada shahaadada kala duwan ee ardayda qalin-jabisa iyo kuwa shahaadada koowaad haysta.
Injineernimada deegaanka iyo sayniska
Haddii aad tahay arday qalin jabiyay oo doonaya inuu ku barto injineernimada Kalifoorniya, Caltech ayaa adiga kugu habboon adiga.
Machadka tiknoolajiyada ee California wuxuu bixiyaa barnaamijyo deeq waxbarasho ah oo kaa caawin kara inaad maalgaliso waxbarashadaada.
Marka, haddii aad rajeyneyso inaad ka hesho abaalmarin deeq waxbarasho jaamacaddan, ka dib waxaan kugula talin doonaa inaad gujiso xiriirka deeqaha waxbarasho ee hoose, si aad u aragto tilmaamaha lagama maarmaanka u ah sida loo dalbado mid ka mid ah deeqda waxbarasho ee ay bixiso Caltech adiga.
Tani waa jaamacad gaar loo leeyahay oo ku taal Los Angeles California oo sidoo kale bixisa barnaamijyo shahaadada koowaad iyo qalin-jabinta ah ee injineernimo kala duwan iyo farsamooyin kale.
Iskuulka Injineerinka ee USC Viterbi wuxuu ka mid yahay kuwa ugu sarreeya qaranka mugga waxqabadka cilmi baarista. Waxay ka kooban tahay siddeed waaxood oo tacliimeed iyo dhowr barnaamijyo adeeg ah.
Aerospace iyo Mechanical Engineering
Kiimikada kiimikada iyo sayniska maaddada.
Warshadaha Warshadaha iyo Nidaamka
Jaamacadda Koonfurta California waxay bixisaa barnaamijyo deeqo waxbarasho oo kaa caawin kara inaad maalgaliso waxbarashadaada.
Marka, haddii aad rajeyneyso inaad ka hesho abaalmarin deeq waxbarasho jaamacaddan, ka dib waxaan kugula talin doonaa inaad gujiso xiriirka deeqaha waxbarasho ee hoose, si aad u aragto tilmaamaha lagama maarmaanka u ah sida loo dalbado mid ka mid ah deeqda waxbarasho ee ay bixiso USC adiga
Jaamacadda Santa Clara waa jaamacad Jesuit gaar loo leeyahay oo ku taal Santa Clara, California.
Iskuulka injineernimada Santa Clara University Santa wuxuu bixiyaa 34 barnaamijyo shahaadada injineernimada ah oo loogu talagalay ardayda dhigata shahaadada koowaad iyo kuwa qalin jabiya.
Kombiyuutarka iyo injineernimada
Maareynta injineernimada & hoggaanka
Nidaamka Awoodda iyo Tamarta Waarta
Aerospace Engineering (MS kaliya)
Jaamacadda Santa Clara University waxay bixisaa qaar ka mid ah barnaamijyada deeqaha waxbarasho ee kaa caawin kara inaad maalgeliso waxbarashadaada.
Marka, haddii aad rajeyneyso inaad ka hesho abaalmarin deeq waxbarasho jaamacaddan, ka dib waxaan kugula talin doonaa inaad gujiso xiriirka deeqaha waxbarasho ee hoose, si aad u aragto tilmaamaha lagama maarmaanka u ah sida loo dalbado mid ka mid ah deeqda waxbarasho ee ay bixiso Jaamacadda Santa Clara kugu habboon.
Haa, taasi waa liiska ugu sareysa iskuulada injineernimada ugu fiican California oo leh deeqo waxbarasho oo aad dalban karto.
Marka, hadda markii aad aragtay qaybtaan macluumaadka ah, Maxaad ku qaadanaysaa tan? miyaadan u maleyneynin in qof kale oo banaanka jooga uu raadinayo macluumaadkan? Haa, way raadinayaan waadna ku caawin kartaa iyaga adoo si fudud u riixaya mid ka mid ah badhamada wadaag bulsheed ee hoose si aad ugu gudbiso macluumaadka iyaga.
deeqaha injineernimada kiimikada ee ardayda caalamiga ahdeeqaha injineernimada korontadadeeqaha injineernimada ukdeeqaha injineernimada farsamadadeeqaha internetka ee ardayda injineernimadadeeqo waxbarasho oo loogu talagalay ardayda injineernimada inay wax ku bartaan dibaddadeeqaha waxbarasho ee ardayda injineernimada dumarkadeeqda waxbarasho ee injineernimada
Previous Post:Noocyada 25-ka Sare ee Maareynta Cadhada Online-ka
Post Next:Koorsooyinka khadka tooska ah ee bilaashka ah ee 13 Hillsdale College